Ihe ize ndụ dị ize ndụ nke izere ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ | Martech Zone
Anọ m na-eche banyere ịkpọ aha a, Ihe mere Jonathan Salem Baskin ji adighi nmaMana ekwenyere m na ya n'ọtụtụ isi okwu ya, Mmetụta dị ize ndụ nke Social Web. Ekwenyere m, dịka ọmụmaatụ, na ndị na-elekọta mmadụ na-ejikarị ịmanye ụlọ ọrụ itinye aka na mgbasa ozi na-enweghị nghọta zuru oke banyere ọdịbendị ma ọ bụ akụ na ụlọ ọrụ ha na-arụ ọrụ. Otú ọ dị, o kwesịghị ịbụ ihe ijuanya. Ha na-agbali ire ngwaahịa… ndụmọdụ nke ha!
Ekwetaghị m Maazi Baskin na isi ihe ole na ole, ọ bụ ezie:
Okwu ahu dị egwu na-eweta ụfọdụ foto jọgburu onwe ya nke websaịtị na-ebibi ụlọ ọrụ. Nke bụ eziokwu bụ na, belụsọ na ị na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ na ọnọdụ nchịkwa siri ike, ikwu okwu na ịge ndị ahịa gị ntị abụghị ihe jọgburu onwe ya dịka ọ na-ada. N'ezie, a na-atụ anya ya nke ukwuu ma nwee ekele. Ọ bụrụ na asọmpi gị dị na netwọkụ ị na-anọghị na… rịzọlt nwere ike na-emebi ihe. Ndị ụlọ ọrụ nwere akụrụngwa na usoro iji jikwaa aha ha n'ịntanetị ma jikwaa nkwukọrịta ahụ achọpụtala mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-arụ ọrụ nke ọma site na nsogbu ndị ahịa na-eweta ikike na ụlọ ọrụ ha.
The webusaiti agbanweela ihe niileKarịa ndị ahịa ahịa ga-achọ ikweta. Ikwu na ọ bụghị ga-abụ nha anya nke ikwu na ndị ọrụ anaghị enwe mmetụta na mgbanwe ụlọ ọrụ. E kwuwerị, usoro mmepụta, ngwaahịa, njikwa na ọrụ niile ka dị, nri? Right… ma ịlụ nyere ndị ọrụ ikike imetụta njikwa na ịkwụ ụgwọ. Ndi oru oru nwere ike ime ma obu mebie ulo oru… ha nwere. Nke a bụ nhatanha na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ndị ụlọ ọrụ na-agba ọsọ asọmpi ha site na ịme omume mmekọrịta ọha na eze; ndị ọzọ na-ada n'azụ. Kọwa n'ụzọ ọzọ bụ ihe na-enweghị isi.
Maazi Baskin na-ekwu,:
Ndị mmadụ na-enwe mkparịta ụka gbasara ụdị. Tupu ịntanetị, e nwere obodo nke ọdịdị ala, ọrụ, agụmakwụkwọ, okpukperechi na ọtụtụ ndị otu mmekọrịta nwere ike ịbụ ndị na-adịchaghị ma na-enwu gbaa karịa ndị dị na ntanetị, mana kama nke miri emi ma na-akwado. Ihe omume ha bụ n'ezie n'ụzọ nkịtị-na-arụ ọrụ na nsonaazụ ha na-akọwapụta ndụ. Omume ndi mmadu abughi ihe omuma na teknụzụ; ọ bụ naanị na anyị nwere ọhụụ nke ọma n'akụkụ ụfọdụ nke etu ndị mmadụ si ekwu okwu ugbu a, yabụ anyị chọrọ ịkwalite ma ọ bụ sonye na mmemme ndị ahụ.
Ee, nke a bụ eziokwu… mana na esemokwu a bụ na mkparịta ụka ndị a ugbu a bụrụ akụkụ nke ọha ọha. Enwere ike depụta ha, hazie ma chọpụta n'ime igwe nchọta na obere obere. Ndi mmadu na-eleba anya na ihe na-ezighi ezi na nyocha nke otu ulo oru na-achikota. Ahịrị a na-atụghị anya na ijikwa nsogbu ndị ahịa n'oge a nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na aha ụlọ ọrụ ebe ọ na-emebeghị mbụ.
Adịghị ekwe ka ndị ahịa zoo n'azụ akara ngosi, okwu mkparịta ụka, na ịba ụda mara mma ọzọ… ndị ahịa na-amanye ka ha gwa ndị mmadụ okwu ozugbo. Anyị na-ekwubu okwu naanị… ugbu a anyị ga-ege ntị ma zaghachi. Ọ dịghị nzaghachi na mpaghara mmekọrịta a yiri ka ị naghị echebara ndị ahịa gị echiche. Ahịa adịghị njikere nke ọma maka nke a… ma na-scrambling ịmụta mgbochi management, ịkparịta ụka n'ingntanet, na ndị ọzọ na nkà ọma karịrị agụmakwụkwọ ha na ahụmahụ.
Mmetụta dị na azụmahịa dị adị. Ndị ụlọ ọrụ na-achọ ego iji kpuchie mbọ achọrọ iji nyochaa ma zaghachi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Nke a bụ nsogbu ọzọ agbagharala elekọta mmadụ media gurus. Ha na-elelị akụrụngwa achọrọ iji bipụta akwụkwọ zuru ezu, zaa ọsịsa ọsọ ọsọ, ma zụlite usoro achọrọ iji mejupụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Yabụ, ebe m kwenyere na gurus rụọ ọrụ na-adịghị mma na ndị isi na ịkwadebe ha maka websaịtị mmekọrịta, ekwenyere m na izere nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị oke ize ndụ.
Tags: jonathan salem baskinazụmahịa mgbasa ozi mmekọrịtamgbasa ozi mgbasa ozielekọta mmadụ na weebụ
Atụmatụ 5 iji bulie azụmahịa gị na ekwentị